Galatifo 1 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔde Kɔmaa Galatifo 1:1-24
Asɛmpa foforo biara nni hɔ (6-9)
Asɛmpa a Paul kae no fi Onyankopɔn hɔ (10-12)
Sɛnea Paul bɛyɛɛ Kristoni ne adwuma a ahyɛase no ɔyɛe (13-24)
1 Me Paul na merekyerɛw krataa yi. Meyɛ ɔsomafo, nanso ɛnyɛ nnipa na wɔpaw me na ɛnnam onipa bi so, na mmom Yesu Kristo+ ne Agya Onyankopɔn+ a onyan no fii awufo mu no na wɔpaw me; 2 me ne anuanom a wɔka me ho nyinaa de krataa yi rekɔma Galatia asafo ahorow: 3 Yɛn Agya Onyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo adom ne asomdwoe nka mo. 4 Ɔno na yɛn bɔne nti ɔde ne ho mae+ na ama wagye yɛn afi wiase bɔne* a ɛwɔ hɔ seesei yi mu,+ efisɛ saa na yɛn Nyankopɔn ne yɛn Agya no pɛ;+ 5 ɔno na anuonyam nka no daa daa. Amen. 6 Nea ɔnam Kristo adom so frɛɛ mo no, ɛyɛ me nwonwa sɛ moretwe mo ho* ntɛm saa afi ne ho akɔ asɛmpa foforo ho.+ 7 Nanso ɛnyɛ sɛ asɛmpa foforo bi wɔ hɔ; ɛno ara ne sɛ ebinom wɔ hɔ a wɔrehaw mo,+ na wɔpɛ sɛ wɔkyea Kristo asɛmpa no. 8 Asɛmpa a yɛka kyerɛɛ mo no akyi no, sɛ mpo yɛn anaa ɔbɔfo bi fi soro bɛka asɛmpa foforo bi kyerɛ mo a, onnue. 9 Sɛnea yɛadi kan aka no, meresan aka bio sɛ, asɛmpa a moagye atom yi akyi no, sɛ obi bɛka asɛmpa foforo bi kyerɛ mo a, onnue. 10 Enti nnipa na seesei mepɛ sɛ wogye me tom anaa Onyankopɔn? Mepɛ sɛ mesɔ nnipa ani anaa? Sɛ meda so sɔ nnipa ani a, anka menyɛ Kristo akoa. 11 Anuanom, merema moahu sɛ asɛmpa a meka kyerɛɛ mo no, emfi nnipa hɔ;+ 12 nea ɛte ne sɛ, mannya no nnipa nkyɛn, na ɛnyɛ obi nso na ɔkyerɛkyerɛɛ me; Kristo mmom na oyii no adi kyerɛɛ me. 13 Ɛnyɛ dɛn ara a, moate me kan abrabɔ a na mewom wɔ Yudasom mu no;+ ɛne sɛ, mituu m’ani sii Onyankopɔn asafo no so* denneennen,* na midii wɔn bɔne kɛse.+ 14 M’atipɛnfo a wɔwɔ me man mu no, mekɔɔ m’anim wɔ Yudasom mu sen wɔn mu pii, na mebɔɔ m’agyanom amammerɛ ho mmɔden kyɛn so koraa.+ 15 Nanso bere a Onyankopɔn a ɔmaa me maame woo me,* na ɔnam n’adom so frɛɛ me+ no hui sɛ eye 16 sɛ ɔfa me so yi ne Ba no adi na meka ne ho asɛmpa kyerɛ amanaman no,+ me ne onipa dasani* biara antu agyina saa bere no. 17 Saa ara nso na mankɔ wɔn a wɔbɛyɛɛ asomafo ansa na merebɛyɛ bi no nkyɛn wɔ Yerusalem, na mmom mekɔɔ Arabia, na mesan baa Damasko bio.+ 18 Afei mfe abiɛsa akyi no, mekɔɔ Yerusalem+ kɔsraa Kefa,*+ na midii nnafua 15 wɔ ne nkyɛn. 19 Nanso manhu asomafo a aka no mu biara, gye Awurade nua Yakobo.+ 20 Seesei nea merekyerɛw mo yi, metumi agyina Onyankopɔn anim aka sɛ ɛnyɛ atoro na meredi. 21 Ɛno akyi no, mekɔɔ Siria ne Kilikia amantam mu.+ 22 Nanso na Kristo asafo ahorow a ɛwɔ Yudea no nhuu m’anim da. 23 Nea na wɔate ara ne sɛ: “Onipa a bere bi na ɔtan yɛn ani no,+ afei de, ɔka gyidi a na ɔpɛ sɛ ɔsɛe no+ no ho asɛmpa.” 24 Na me nti wofii ase hyɛɛ Onyankopɔn anuonyam.
^ Anaa “mmere bɔne.” Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “wɔretwe mo.”
^ Anaa “metaa Onyankopɔn asafo no.”
^ Nt., “ma ɛtraa so.”
^ Nt., “oyii me fii me maame yam.”
^ Nt., “honam ne mogya.”